Tallaalkii Cudurka Coronavirus Oo Hakad La Galiyay Iyo Sababta Keentay | Dusta News
Home > General > Tallaalkii Cudurka Coronavirus Oo Hakad La Galiyay Iyo Sababta Keentay
September 9, 2020 September 9, 2020 Dusta News68Leave a Comment on Tallaalkii Cudurka Coronavirus Oo Hakad La Galiyay Iyo Sababta Keentay
Tijaabo lagu sameeynayay talaalka feyriska Corona ayaa la hakiyay guud ahaan caalamka ka dib markii dadka sida mutadawacnimada ah loogu tijaabiyay dalka UK uu jirkooda uga falceliyay si ka duwan sidii la rabay.
Waa markii labaad oo hakad la galinayo talaalka ay iska kaashanayaan jaamacadda Oxford iyo shirkadda AstraZeneca, waxaana ku xanuunsaday dad lagu tijaabiyay.
Afhayeen u hadlay shirkadda ayaa sheegay in dadkii ka qeyb galay tijaabadani talaal la dhigay isbataal islamarkana baaritaan madaxbanaan lagu sameyn doono.
Waxaa uu afhayeenka intaa ku daray in seynisyahanadani ay ka go’an tahay inay mudnaanta siiyaan badqabka dadwaynaha. In ka badan 10’000 oo mutadawiciin ah oo ku sugan dalka UK iyo dalal kale ayaa ka qeyb galay tijaabada talaalkani.
Waxaa sidoo kale talaalkan tijaabadiisa ka qeyb galay muwaadiniinta dalalka Koonfur Afrika, Brazil iyo Mareykanka. Waxaa guud ahaan caalamka ay shirkadaha iyo dowladaha u kala cararayaan sidii loo soo saari lahaa talaal looga hortago feyriska fara’aha ba’an ku haya caalamka ee Corona.
Danab oo digniin ka soo saartay isticmaalka wadada xariirisa Kismaayo iyo Janaay-Cabdalle
Madaxda Hirshabeelle, Galmudug Iyo Koonfur Galbeed Oo Soo Gaaray Muqdisho
Soomaaliya oo diidmo kala hortimid taageerida qaraar ku aadan Nile oo ka soo baxay Jamacada Carabta
Xildhibaannada Golaha Shacabka oo maanta ansixiyay xeer dood badan ay ka taagneyd
Puntland oo laga xusayo sanad-guuradii 22-aad ee ka soo wareegtay aas-aaskeedii